Shiinaha YX-150 soosaarayaasha iyo alaabada | Yixin
YX-150, oo waafajinaysa habka alxanka ee MIG (FCAW / GMAW), wuxuu ku habboon yahay in la miiro dhuumaha noocyada birta. Waa dhumucda dhumucda lagu dabaqi karo waa 5-50mm (kor ka sarreeya 4114mm), oo ku habboon in laga shaqeeyo goobta. Iyada oo faa'iidooyinka shaqada xasiloon, qiimo jaban iyo maarayn habboon, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gudaha iyo dibedda.
Taxanaha YX-150 dhammaan mashiinka alxanka dhuumaha otomaatiga ah wuxuu ku habboon yahay dhuumaha ka sarreeya DN114mm iyo dhumucda darbiga ka weyn 5mm. Dhuumaha waa la hagaajiyaa oo madaxa alxanka ayaa si iskiis ah u gurguurta si loo ogaado alxamida booska oo dhan (5G alxanka).
Nidaamka alxanka ayaa qaata hufnaan sare, qiimo jaban CO2 alxanka gaaska gaashaaman, iyo siligga alxanka ayaa noqon kara mid adag ama qulqulaya. Madaxa alxanka ayaa si magnetik ah loogu soo jiiday dhuumaha, iyo xuduudaha alxanka ayaa si fiican loo hagaajiyay iyada oo loo marayo koontaroolka fog ee gacanta si loo xakameeyo madaxa alxanka si otomaatig ah loogu dhejiyo dhuumaha.
Pip Dhuumaha la adeegsan karo: Noocyada kala duwan ee dhuumaha dhaadheer ee qaada, dhuumaha qaybinta kuleylka, dhuumaha dhulka hoostiisa mara, dhuumaha howsha iyo wixii la mid ah, oo ku habboon alxanka goobta.
Wax alxanka: Birta kaarboonka, birta ka sameysan birta, birta daawaha ah, birta heerkulka hooseeya.
Weld Weld la isticmaali karo: Dhexdhexaadiyaha tuuboyinka oo ka sarreeya 150mm, dhumucdiisuna ka sarreyso 8mm, Dhuumaha dhumucda adag ayaa lagu dhejin karaa dhexda iyo daboolka.
Head Madaxa alxanka: Waa fududahay in la qaado oo la qaado, nuugista magnetka joogtada ah oo lagu dabaqi karo si toos ah alxanka goobta.
Remote-xakamayso: Deji oo xakamee cabirka alxanka meelaha fog, fudud ee wax lagu barto kuna shaqeeya xoog xoog leh.
Efficiency Hufnaan sare: Alxanka hufan iyo waqti ka yar 3-4 jeer ka badan alxanka qaansada gacanta.
Quality Tayo sare: Alxamadu waxay leedahay muuqaal aad u wanaagsan, malahan wax dabacsanaan ah, ka mid noqosho laami ah, isugeyn la'aan iyo ifafaalo kale. Tayada alxanka ayaa wanaagsan, iyo heerka u qalma ee lagu ogaanayo cilladaha ultrasonic waa in ka badan 97%. La kulan shuruudaha baaritaanka cadaadiska ama saameynta, hoos u dhaca, foorarsiga iyo kormeerka guryaha kale ee farsamada.
* Ilaalinta Gaas: 100% CO2 / 80% Ar + 20% CO2
* Magnetic Nuugo
* miisaanka: 11kg
* KEMPPI X3 Quwada Korantada
* Saddex jumlad 380V ± 15%
* Fiilo la adeegsan karo: Fiilo adag / Fiilo-qulqulaya
* Fiix-cored Wire Dia: 1.0mm / 1.2mm
* Si Fudud Loo Shaqeeyo
* Xakamaynta guud
Danab shaqeeya Danab Lagu Qiimeeyay DC12-35V Caadi: Awoodda Lagu Qiimeeyay DC24 ： ＜ 100W
Range Hadda 80A-500A
Range danab 16V-35V
Alxanka qoriga Xawaaraha Xawaaraha 0-100 Sii Wadida
Alxanka Qoriga Wareejinta Width 2mm-30mm Sii wadida hagaajinta
Waqtiga bidix 0-2s Sii wadida hagaajinta
Waqtiga saxda ah 0-2s Sii wadida hagaajinta
Xawaaraha Alxanka 0-99 （0-750） mm / daqiiqo
Ballaca tuuboyinka In ka badan DN150mm
Dhumucda darbiga lagu dabaqi karo 8mm-50mm
Waxyaabaha Khuseeya Birta kaarboon, birta aan xarka lahayn, birta daawaha ah, birta heerkulka hooseeya, iwm.
Khadadka alxanka lagu dabaqi karo Dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha tuubbada, sida walxaha biibiile-tuubbo, alxanka xusullada tuubbada, welve-flange welds, (haddii loo baahdo, ku xir xiriirinta kala-guurka dhuumaha oo dhan)
silig alxanka （φmm） 1.0-1.2mm
Cabirka （L * W * H） Madaxa alxanka230x140x120mm
Miisaanka （KG） Madaxa alxanka 11kg
Alxanka gacanta Alxanka Automatic
Faa'iidada Faa'iido daro Faa'iidada Faa'iido daro
Qalab fudud, fudud in la dejiyo Xirfad sare ayaa loo baahan yahay Tikniyoolajiyad otomaatig ah oo magnetic ah, adeegsi fudud oo la qaadan karo, oo aan lahayn raad Difaaca dabaysha ayaa loo baahan yahay
La qaadan karo / bariga loo guuro Wareegga tababarka dheer Oolnimada sare: 3-4 jeer ka dhakhso badan alxanka gacanta Qiimaha sareeya hal mar (laakiin yaree qiimaha alxamida iyo walxaha)
kala duwanaansho Qiimaha shaqada ee sareeya Keydso walxaha alxanka: silig, gaas, iyo wixii la mid ah.
Bannaanka wanaagsan Tayada alxanka oo liidata Yaree shaqada alxanka iyo kharashka shaqada, alxanka isdaba jooga ah ayaa waqtiga badbaadiya
Guryaha farsamo fiican Muuqaal alxamid xumo ah Kordhi wax soo saarka oo yaree qiimaha alxanka, tayada la isku halleyn karo iyo qaababka qaabka wanaagsan
Xakamaynta weelka wanaagsan ee dhammaan jagooyinka Qiimaha waqtiga badan iyo shaqo adag Xirfad hoose oo loo baahan yahay iyo hal badhan oo la bilaabo
Agab ballaaran Qaybo yar, oo si fudud loo dhaqaaqo
Tababar loogu talagalay natiijooyinka wanaagsan
Waxaan ku tababaran karnaa wadahaaga inuu maareeyo mashiinka alxanka (hawl wadeeno khibrad u leh alxanka aasaasiga ah ayaa la heli karaa). Marka wax waliba si fiican loo dhammeeyo, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo alxankaaga.
Waxaan u qaadaneynaa sii socoshada shirkadaada mid dhab ah. Sidaa darteed waxaan bixinaa dhowr xalal dayactir. Marka hore, shaqaalahaaga waxaa loo tababaray inay iyagu dayactirka joogtada ah iyagu sameeyaan. Haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah, waxaan soo bandhigi karnaa xulashooyinka soo socda.
1. Thanks to jawiga qadka, waxaan ku siin karnaa xalal khadka tooska ah si dhibaatooyinka looga xaliyo meel fog. Waxaan ku siin karnaa taageero taleefon si loo caawiyo hawl wadeenadaada.
2. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah, waanu la tacaali karnaa asap. Haddii ay jiraan wax aanan ka qaban karin khadka tooska ah, waxaan sidoo kale ku bixin karnaa tababarka goobta.
Hore: YX-150 PRO